Iindaba - Yintoni iziqwenga zeminwe?
Ukuqhekeka komnwe kusetyenziswa ukukhusela umnwe owenzakeleyo. Umsebenzi wayo ophambili kukugcina umnwe uzolile kwaye uthintele umnwe ekugoba. Ukongeza, inokunceda umnwe ukuba uphinde uchache emva kwesifo samathambo, uqhaqho, utyando, njl njl, okanye ezinye izizathu. . Iziqwenga zeminwe ezingezizo zihlala zihlala zenziwe ngentsimbi okanye ngeplastiki. Iziqwengana ezenziwe ekhaya zinokwenziwa phantse kuyo nayiphi na into ethe tyaba, kubandakanya neenkuni.
Ukuba umnwe owaphukileyo awunakulungiswa, kunokubangela ukuphilisa amathambo okungaqhelekanga.
Iminwe eyaphukileyo okanye ekrunekileyo inokudumba kwaye ibe buhlungu. Olu hlobo lokwenzakala lwenzeka ngokutshitshisa, ukukhawulezisa, okanye ukugoba umnwe. Iminwe eyaphukileyo kunye nokujola akusoloko kufuna isamente. Iziqwenga zeminwe zingathengwa kwikhawuntara okanye zibekwe ziingcali zononophelo lwempilo.
Umnwe olula womnwe ngumnatha. Kwi-splint, thepha umnwe owonzakeleyo kunye nomnwe osondeleyo ongonzakalanga kunye. Iteyiphu ikhusela iminwe emibini ukubathintela ekuguqulweni. Obu buchule bokuqhekeka komnwe buqhelekileyo busetyenziselwa ukwenzakala kweminwe yemigudu. Kufanelekile ukuba unyango lwe-knuckle dislocation okanye i-sprain wenzakala ebangelwa yi-jam jam.
Iminwe ekrunyiweyo ayidingi kuphoswa.
Iteyiphu kufuneka ibekwe ngaphezulu nangaphantsi kwendawo eyenzakeleyo. Xa umnwe weringi wonzakele, umnwe omncinci kufuneka usetyenziselwe ukulungisa iteyiphu. Oku kuya kukhusela umnwe omncinci kwingozi. Iminwe esikiweyo akufuneki isetyenziselwe ukwaphuka.
Abantu abanxibe iziqwenga zeminwe.
Ukulimala kwethenda okanye ukwaphuka, sebenzisa iziqwenga zeminwe ezingashukumiyo. Uqhekeko olungashukumiyo luhambelana nemilo yomnwe kwaye lukhusela umnwe njengoko uphilisa. Olu hlaselo luvumela ukubekwa kweminwe kwimpiliso efanelekileyo. Iziqwenga ezingatshintshiyo zihlala zenziwe ngentsimbi eguqukayo kunye nelining ethambileyo kwelinye icala. Ezinye iziqwenga zigxunyekwe kuphela phantsi kweminwe, ngelixa ezinye iziqwenga zisongela ngokupheleleyo iminwe ukukhusela ngakumbi iminwe.
Imichako ebekiweyo inokusetyenziswa xa iimeko zonyango ezahlukeneyo zinyanzela amalungu eminwe ekufuphi kwisikhonkwane ukugoba ngokuqhubekayo. Splint kunye nomnwe kwaye udlule ngokudibeneyo. Iyanyanzela ukuba amalungu ahlale kwindawo engavulekanga ngelixa avumela amanye amalungu ukuba agobe ngokukhululekileyo. Uninzi lwezinto ezibunjiweyo zenziwe ngeplastiki.
Iimpawu zeminwe ezinamandla zibonelela ngoncedo lwexesha elide kwiminwe egobileyo ye-arthritic. Isinyithi, igwebu, oku kusasazeka kwenziwa ngeplastiki. Izigulana zihlala zinxiba ebusuku xa zilele. Isixhobo sasentwasahlobo sinokuhlengahlengisa ukolula kweminwe.
Ukuqhekeka okwenziwe ngokwakho kugxunyekwe phantsi komnwe owenzakeleyo ukunyanga ukuqaqamba okuncinci kunye nokulimala. Induku eyenziwe ngomthi ethe tyaba ezantsi bubungakanani obulungekileyo kunye nokumila kwento yokucheba eyenziwe ekhaya. Ukuba umnwe owenzakeleyo ukhubazekile kwaye useneentlungu okanye ubundindisholo emva kweyure lokuphumla, kuya kufuneka ufumane unyango.